Flim2MM: Srimanthudu (2015)
ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖေါက်တဲ့ Harsha ဟာ မီလျံနာတယောက်ရဲ့သားဖြစ်ပေမယ့် သူ့အဖေရဲ့လုပ်ငန်းကို စိတ်မဝင်စားပဲ၊ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးတာကို ပျော်မွေ့နေသူတယောက်ပါ။ သူချစ်တဲ့သူတယောက်ကို ရခဲ့ပြီး အဲ့ဒီချစ်သူနဲ သူနဲ့ တရွာတည်းသားဆိုတာ ရုတ်တရတ်သိလိုက်ရပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ရွာလေးဟာ အခုဆိုရင် ဝန်းကြီးနဲ့ အမျိုးတော်တဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းတခုက ကြီးစိုးနေပြီးရွာသားတွေစိတ်သောကရောက်နေတာကို ကကြည့်ရက်တော့တဲ့ အခါ ၊ အရင်တုန်းက သူ့အဖေ ကူညီခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီရွာကို အခက်အခဲတွေကြားက ဘယ်လိုရအောင်ကယ်တင်မလဲဆိုတာကိုတော့
ဒီဇာတ်လမ်းဟာ DVD rip လုပ်ထားပြီး မူရင်း မြန်မာဘာသာပြန်တာ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ မပြည့်စုံပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဓိကလိုရင်းကိုတော့ သိနိုင်ပါတယ်။ အစက မတင်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားထားပေမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းပြီး ဖိုက်တင်ခန်းတွေကြမ်းတာမို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်မပြေရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ ကြိုတင် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ် ပိတ်သတ်တို့။
IMDB 7.8 ရထားတဲ့ ဘောလီးဝုတ် အချစ်အက်ရှင်ကားဟာ 2h:38 mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုဒ် 589 MB နဲ့ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ HD လိုချင်ရင်ပြောပါ။ 2GB ရှိပါတယ်။
Posted by Y Junction at 12:37:00 PM
Labels: Action, Bollywood, Drama, Romance
zawe zawe August 18, 2016 at 7:14 PM
zawe zawe August 18, 2016 at 7:16 PM
2GBလင့်​​လေး တင်​​ပေးပါ​နော်​ HDကြည့်​ချင်​လို့ပါ
kwaiyan August 18, 2016 at 7:42 PM
HD လိုပါတယ်။ ကြည့်ရင်လဲကောင်းကောင်းလေးကြည့်ချင်လို့ပါ။
Thu Ko August 18, 2016 at 10:18 PM
HD နဲ့ဆွဲပြီးပါပြီ ​နောက်​ကိုလည်း GB​ကျော်​ရင်​လည်း
min si thu aung August 19, 2016 at 2:34 AM
Oliver Keane August 19, 2016 at 8:59 PM
xander December 18, 2018 at 9:10 PM
hd link please. old link not working !!!
Myintsoe mwd08 August 21, 2016 at 5:38 AM
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်....HD Version နဲ့ ကြည့်လို့ ရလို့ ပါအက်မင်များဒီထက်ပိုအောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်....အမြဲလည်းအားပေးနေမှာပါ(နောက်ဆိုရင် အကြည်များကိုသာဦးစားပေးတင်ပေးပါနော်)
jalaby napyae October 10, 2016 at 12:55 AM